सुदुर दैनिक संवाददाता २०७७, ११ श्रावण आईतवार २१:११ 806 जनाले पढ़िसके
के डाक्टरले एक व्यक्तिको टाउँको अर्को व्यक्तिको शरीरमा फिट गर्न सक्छन् ? मेडिकल साइन्समा अन्य अ’ङ्गजस्तै टाउको प्रत्यारोपण पनि सम्भव हुन सक्छ ? बेलायतका एक पूर्व न्यूरोसर्जन तथा रोबोटिक्स विज्ञले यस विषयमा आफ्नो धारण राखेका छन्।
डेली मेलको रिर्पोटका अनुसार डा म्याथ्युका अनुसार प्रत्यारोपका क्रममा यदी ब्रेन र स्पाइनल कार्ड साथमा राख्यो भने असम्भव हुँदैन्। यदी यो सम्भव भयो भने जुन व्यक्तिको हात खुट्टा काटिएको छ वा शरीर पूरै खराब भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिका लागि फाइदाजनक हुने गर्दछ। साथै म’रिसकेका व्यक्तिलाई पनि जिउँदो बनाउन सकिन्छ। ऐजेन्सिको सहयोगमा